‘माफ गर छोरी, तिमी बोलाइरहेकी थियौँ तर म आउनैँ सकिनँ’ « Loktantrapost
‘माफ गर छोरी, तिमी बोलाइरहेकी थियौँ तर म आउनैँ सकिनँ’
४ जेष्ठ २०७८, मंगलवार १३:२३
झापा, ४ जेठ । इजरायली हवाई आक्रमणमा ध्वस्त भएको घरभित्र पुरिएकी गाजाकी छ वर्षीया बालिकाको सात घन्टापछि सकुशल उद्धार गरिएको छ ।
सुजी एस्कुन्ताना नामकी ती बालिकालाई अहिले गाजाको सबैभन्दा ठूलो अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । गत आइतबार इजरायलले गरेको हवाई आक्रमणमा उनको घर ढल्दा उनकी आमा र चार जना भाइबहिनी बितेका छन् ।
सात घन्टासम्म भग्नावशेषमा पुरिएकी सुजीलाई उद्धारकर्ताहरूले निकालेर सिफा अस्पताल पुर्याएका थिए । सोही अस्पतालमा उनका घाइते बुवा रियाद एस्कुन्तानाको पनि उपचार भइरहेको छ । ‘मलाई माफ गर, मेरी छोरी। तिमी बाबा आउनु भन्दै रोइरहेकी थियौ तर म आउनै सकिनँ,’ छेउकै अर्को बेडमा आइपुगेकी छोरीका हात चुम्दै रियादले भने ।
गाजा सहरमा रहेको उनीहरूको घर आइतबार बिहानै इजरायलले हानेको रकेटले ध्वस्त बनाएको थियो । आइतबारमात्रै इजरायलले गरेको आक्रमणमा परी ४२ जनाको मृत्यु भएको गाजाका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
इजरायलले गाजालाई नियन्त्रणमा लिएको विद्रोही सैन्य समूह हमाससँगै इस्लामिक जिहादलगायत अन्य समूहलाई लक्षित गरी आक्रमण गरिरहेको जनाएको छ । ती समूहले अहिलेसम्म २ हजार ८ सय रकेट हानिसकेको उसको दाबी छ । गाजाबाट आएका रकेटबाट अहिलेसम्म १० जना इजरायलीको मृत्यु भएको छ। रकेट आक्रमणबाट जोगिन लाखौं मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पठाइएको छ ।
‘यो हताहतीको कारण हमासले आपराधिक तरिकाले हामीमाथि गरिरहेको आक्रमण हो,’ इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतन्याहूले भनेका छन् । गाजाका विद्रोही सैन्य समूहको टनेल सिस्टमलाई लक्षित गरी गरिएको आक्रमणमा एस्कुन्तानाको घर पनि परेको थियो । दर्जनौं उद्धारकर्ता, प्रहरी अधिकारी र आफन्तले उनको परिवारको खोजी गरेका थिए ।
अस्पतालमा पुगेका आफन्तहरू सुजीका अरू भाइबहिनीको मृत्युको खबरले मर्माहत भएका देखिन्थे ।
सुजीलाई सामान्य चोट लागे पनि उनको अवस्था गम्भीर छैन। उनको एक्स–रे गरेपछि डाक्टरहरूले उनलाई बुवासँगैको बेडमा ल्याएर राखिदिएका हुन् । रियादले आफूहरू बस्ने घरमा डाक्टरहरू पनि बस्ने भएकाले परिवार सुरक्षित रहेको ठानेको बताएका छन् । उनीहरूले बच्चाहरूलाई सुरक्षित कोठामा राखेका थिए ।
‘अचानक आगोको मुस्लोजस्तो रकेट आयो र पर्खाल भत्कियो,’ रियादले समाचार संस्था रोयटर्ससँग भनेका छन्,‘हामी छोराछोरी हेर्न जाँदै थियौं । अर्को रकेट आएर बिस्फोट भयो । बिस्फोटका बेला उनले छोराछोरीले ‘बाबा, बाबा’ भनेको सुनेका थिए ।
‘म आफैं फसेको थिएँ । उनीहरूलाई हेर्न सकिनँ,’ उनले भने । सुरूमा उद्धारकर्ता आउँदा रियादले आफू जिउँदै छु भन्ने जानकारी दिन सकेनन् । आधा घन्टापछि आएका अरू उद्धारकर्तालाई मात्र उनले जनाउ दिन सके । निधारमा पट्टी बाँधेर अस्पतालको बेडमा पल्टिएका रियादले सुरूमा त आफूले पनि मर्न चाहेको बताए ।
‘दुनियाँमा भएको सबै रिसले म भरिएको थिएँ । तर जब मेरा छोरीहरूमध्ये एक जना बाँचेकी छ भन्ने सुनें भगवानलाई धन्यवाद दिएँ । यो छोरीले थोरै भए पनि मेरा अरू छोरीहरूको थोरै भए पनि मुस्कान दिनेछ किनकी यो उनीहरूकी बहिनी हो,’ रियादले भने ।
विष्णुमायाको अनुहारबाट फालियो मासुको लुर्को
मेचीनगर, २ असोज । मेचीनगर वडा नं. ८ की विष्णुमाया मगरको अनुहार ढाक्ने गरी फैलिएको मासु शल्यक्रिया गरेर
जेसिज सप्ताहको सातै दिन स्वास्थ्य शिविर
झापा, २ असोज । मेचीनगर लेडी जेसिजले सात दिन सातैवटा स्वास्थ्य शिविर गरेर उदाहरणीय रुपमा सप्ताह कार्यक्रम आज
पति विदेशमा भएकी महिलाको छिमेकीद्वारा हत्या
झिलझिले, २ असोज । पाँच दिन अघि छिमेकीको ज्यानमारे आक्रमणमा घाइते भएकी यहाँकी एक महिलाको हिजो मृत्यु भएको
मेचीनगर साकोसको असोज १५ गते साधारणसभा हुँदै
मेचीनगर, १ असोज । मेचीनगर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को १४ औं वार्षिक साधारणसभा असोज १५